Obbo Daawud Ibsaa: Har’arraa eegalee itti gaafatamni WBO abbootii gadaa fi ummata Oromoof ta’a Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Daawud Ibsaa: Har’arraa eegalee itti gaafatamni WBO abbootii gadaa fi ummata Oromoof ta’a
Miseensota Gumii Abbootii Gadaa fi Haadholii Siiqqee
(bbcafaanoromoo)—Gumiin Tokkummaa Abbootii Gadaa hooggantoota ABO fi ODP walin mari’ataa jiru.
“Ummatni keenya nagaa barbaada. Kanaafuu anatu caala osoo hin jedhin nagaa uummataaf hojjechuu qabna”, kan jedhan Walitti Qabaan Gumii Abbootii Gadaa Oromoo Bayyanaa Sambatu, dhaabbileen lamaan nagaa akka buusanis gaafatan.
Abbaa Gadaan duraanii Bayyanaa Sambatuus, ”amma isin araaramtanii waraana dhaabuuf kadhaa keenya nurraa fudhattanitti manatti hin gallu,” jedhaniiru.
“Paartiileen maqaa Oromootin qabsaa’an biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsaa’aa jiru”, kan jedhan itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa ODP Dr Alamuu Simee gareen maqaa ABO Obbo Daawud Ibsaatiin hogganamuun hidhate karaa Lixaa fi kibbaatin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan.
Haa ta’u malee, qaamni hidhate kun godinaalee Wallagga afran irraa eegalee iddoosaa babbal’ifachuun gara giddugaleessa biyyaa iddoowwan akka Gindabarat fi sulula Mogoritti babal’achuusaa himan.
Kana malees Dr Alamuun Simee hooggansa ABO Finfinnee jiru osoo hin taanee qaama hidhatee godinaaleerra jiru mariisisuu keenyatu bu’aa argamsiisaa jira jechuun marii abbootiin gadaa godina Gujii hooggantoota waraanaa ABO walin taasisan himan.
Hayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitin waliigalteen isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsifamuuf gaafachuu isaaniifi Gumiin tokkummaa abbootti gadaas qaama sadaffaa ta’uf xalayaadhaan gaafatanii turanis guyyaa marii garuu hooggansi ODP qofti gara Eertiraatti akka imalan himan.
”ABO’n galu malee nagaan hin bu’u”
Marii sa’aatii lamaaf Eertiraatti taasifameen waraanni ministira mummee duraanii Obbo Mallasin nurratti labsame yaa dhaabbatu kan jedhu gaafannee ture jedhan Obbo Daawud.
Dhimmi kan biraa caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaa irraa bilisa akka ta’anif waadaa akka nuf galaniif mari’anneerra jedhan.
Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee miseensootni WBO humna addaa Oromiyaa ta’anii akka hojjetaniif gaafannee ture kanaafis koree ijaaruf waliigalle jedhan.
Haalli amma jiru waan nama qaanessu fi cee’umsa gufachiisaa jiru kan jedhe daayrektarri olaanaa OMN Obbo Jawaar Mahaammad hayyu dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa loltootni dhaabichaa gara kaampiitti akka galaniif waamicha dhiyeessuu qabu jedhan.
Ammatti dhimmi irratti wal dhabnu baay’ee hin qabnu kan jedhan Dura Taa’aan itti-aanaa KFO Obbo Baqqalaa Garbaa “waraanni bilisummaa Oromoo akka deebi’uuf Obbo Daawud ajaja dabarsuu qabu mootummaanis waraana bobbaase gara mooraatti deebisuu qaba, ” jedhan.
Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi’u akka waan moo’ametti osoo hin taanee kabajni fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta’uu qaba jedhaniiru.
Ummatni tokkumaa sabaa fi tokkummaa qeerroo Oromoo cimsuu qaba kan jedhan dura taa’aan KFO Dr Mararaa Guddinaa gama isaaniitin sabni keenya gara araaraa fi misoomaatti dhufuu qaba jechuun himaniiru.
Gareen lachuu lolli akka dhaabbatuf fi araarri akka bu’uuf sabaaf waadaa galuu qabu dhimma WBO irrattis gadi fageenyaan mari’atamuu qaba jedhan.
Waraana mooraatti yaa deebi’u kan jedhu irratti ammallee sodaan nageenyaa naannoo daangaa Benishaangul Gumizitti waan jiruuf waraanni naannichaa akka hin sochoone Dr Alamuu himan.
”Maddii waldhabdee mootummaafi ABO Waraana Bilisummaa Oromooti. Sana itti-gaafatama ofirraa buufnee ummata Oromoofi Abbootii Gadaatti kennineerra,” jedhaniiru.
Koreen abootii gadaaf haadha siinqee, hayyuulee fi bakka bu’oota dhaabbilee lamaanii of keessatti qabate fi miseensoota waliigalaa 71 qabu hundaa’eera.
Dr Qana’aa Lammi, Obbo Getaachoo Dibbisaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Piroofessar Taaddasaa Bariisoo, Adde Makiyaa Maammiyyo fi Dr Girmaa Baalchaa namoota koree kana keessatti filataman keessaa dha.
Gama biraatin ABO irraa Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, Obbo Abdii Raggaasaa fi Obbo Dheengee Huseen ODP irraa immoo Obbo Mogas Ida’ee, Obbo Bazzu Waaq-beekaa fi Obbo Alamaayyoo Ijiguu koree teeknikaa keessatti ni hirmaatu.
Koreen kun gaafa guyyaa 16 Amboo irratti mari’achuuf sagantaan qabataniiru.